विश्वकपको पूर्वसन्ध्यामा मनोरञ्जनमा व्यस्त फ्रान्सका खेलाडी
२०७५ जेठ २९ मंगलबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन दुई दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा फ्रान्सका खेलाडीहरु मनोरञ्जनमा व्यस्त देखिएका छन् । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेलाई यी सर्तहरु दियो प्रशासनले
२०७५ जेठ २९ मंगलबार, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न विभिन्न सर्त दिएको छ । ... बाँकी अंश»
बेल्जियम विश्वकपका लागि तयार, लुकाकुले गरे दुई गोल
२०७५ जेठ २९ मंगलबार, काठमाडौं । बेल्जियम रुस विश्वकपका लागि तयार भएको छ । बेल्जियमले अन्तिम वार्मअप खेलमा कोस्टारिकामाथि ४–१ को जित निकालेको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप विजेताको पुरस्कार कति ?
२०७५ जेठ २८ सोमबार, काठमाडौं । यो वर्षको रसिया विश्वकप फुटबलमा सहभागी ३२ टोलीदेखि उपाधी विजेता सम्मका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ४३ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपयाँ भन्दा बढी खर्च हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
मेस्सीको करियर नै दाउमा छ रुसमा, उपाधि नै दिलाउँछन् कि !
२०७५ जेठ २८ सोमबार, काठमाडौं । रुस विश्वकपका लागि अर्जेन्टिना गत शनिबार नै रुस पुगेको छ । विभिन्न चुनौतीसहित टिम रुस पुगेको हो । सबैभन्दा ठूलो चुनौती कप्तान लियोनल मेस्सीलाई नै रहेको छ । ... बाँकी अंश»
रोनाल्डो र उनको टिमका खेलाडीहरु रुसमा टेकेपछि
२०७५ जेठ २८ सोमबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन अब तीन दिनमात्र बाँकी छ । विश्वका ३१ राष्ट्रहरु रुस पुग्ने क्रम जारी रहेको छ । पोर्चुगल पनि शनिबार राति रुस पुगेको छ । कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोसहित टीम रुस पुगेको हो । ... बाँकी अंश»
नेइमार पनि फर्ममा, ब्राजिल पनि फर्ममा, नेइमारको कीर्तिमानी गोल
२०७५ जेठ २८ सोमबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन अब तीन दिनमात्र बाँकी छ । विश्वकप सुरु हुनुअघिको अन्तिम वार्मअप खेलमा ब्राजिलले उपाधिका लागि दह्रो दावेदारी दिएको छ । ... बाँकी अंश»
एन्फा अध्यक्षलाई मनपर्ने दुई टिमः ब्राजिल र जर्मनी, कारण यस्तो
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको यो संस्करण यही जेठ ३१ गतेदेखि रुसमा सुरु हुँदैछ । विश्वकपका लागि समर्थकहरुले समेत मनपर्ने टिमको जर्सीको जोहो गरिसकेका छन् । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकप खेल्ने ७३६ खेलाडीहरु, यस्तो छ उमेरदेखि खेल्ने क्लवसम्मको नालीबेली
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । रुस विश्वकपका लागि सात सय ३६ खेलाडीहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ । ३२ टोलीहरुको २३ सदस्यीय विश्वकपको टोलीको घोषणा भइसकेको छ । ... बाँकी अंश»
प्रशिक्षणमा फर्किए सलाह, यस्तो दिए बचन
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । इजिप्टका स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह टोलीको प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । रुस विश्वकपको अन्तिम प्रशिक्षणमा सलाह टोलीमा फर्किएका हुन् । ... बाँकी अंश»
विश्वकपअघिको वार्मअपमा कसले कस्तो खेले ?
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन अब ४ दिनमात्र बाँकी छ । विश्वकपअघिको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण एवं वार्मअप खेलमा टिमहरुले मिश्रित प्रदर्शन गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
के भयो मेक्सिकोलाई ? डेनमार्क फर्ममा फर्केकै हो त ?
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन अब ४ दिनमात्र बाँकी छ । विश्वकपअघिको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण एवं वार्मअप खेलमा जित हासिल गर्दै डेनमार्कले आफू अर्को चरण प्रवेशका लागि सक्षम रहेको प्रमाण दिइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
स्पेन विश्वकप उपाधिका लागि तयार, अन्तिम वार्मअपमा पनि विजयी
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन अब ४ दिनमात्र बाँकी छ । विश्वकपअघिको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण एवं वार्मअप खेलमा जित हासिल गर्दै स्पेनले आफू उपाधिका लागि तयार भएको संकेत गरेको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकपअघिको अन्तिम वार्मअपमा के गर्यो फ्रान्सले ? उपाधिलाई तयार छ त ?
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन अब ४ दिनमात्र बाँकी छ । विश्वकपअघिको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण एवं वार्मअप खेलमा फ्रान्सले बराबरीमै चित्त बुझाएको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकपको सबै तयारी पूरा : इन्फेन्टिनो
२०७५ जेठ २६ शनिबार, एजेन्सी। फिफाका अध्यक्ष गियानी इन्फेन्टिनोले रुस विश्वकपक २०१८ को सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन् । आयोजक रुस विश्वकपको लागि शतप्रतिशत तयार रहेको उनले बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो छ विश्वकपका कीर्तिमानी रेफ्रीको कथा
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । अहिले विश्वकप फुटबलको सरगर्मी बढेको छ । मानिसहरु आफ्नो समर्थनको टोलीको विषयमा चर्चा गरिरहेका छन् । साथै खेलाडीहरुको प्रदर्शन र कीर्तिमानहरुको विषयमा पनि व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । ... बाँकी अंश»
पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै गरेको आइसल्याण्डले कसरी सकायो वार्मअप, अर्जेन्टिनासंग भिड्न तयार छ ?
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन मात्र ६ दिन बाँकी रहँदा सहभागी हुने टिमले अन्तिम चरणका वार्मअप खेलहरु खेलिरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
पोर्चुगलले सकायो विश्वकप फुटबलको सुखद वार्मअप, के गरे रोनाल्डोले ?
विश्वकप फुटबलको वार्मअपमा इंगल्याण्डको उत्कृष्ट प्रदर्शन
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप सुरु हुन मात्र ६ दिन बाँकी छ । अन्तिम चरणका वार्मअप खेलहरु भइरहेका छन् । इंगल्याण्डले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
इंगल्याण्डका डिफेन्डर ड्यानी रोजलाई डिप्रेसन, कसरी भयो ?
२०७५ जेठ २४ बिहिबार, काठमाडौं । इंगल्याण्डका डिफेन्डर ड्यानी रोजले आफू डिप्रेसनमा परेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । रोजले यसअघि आफूमा देखिएको चोट र परिवारको वियोगको कारण आफू डिप्रेसनमा परेको बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»